Ihe Nkpuchi Crypto, Onye Ngwuputa Bitcoin ohuru, Ngalaba Ngwuputa Ekwentị - Tianqi
Iduzi teknụzụ: Igbe igbe m na-egwu cryptocurrency nke anyị mepụtara ma rụpụta nwere ike ịchekwa gị ihe dị ka 70% nke ụgwọ ngwupụta. Ọzọkwa, ọnụọgụ ntụkwasị obi ya na-arụ ọrụ dị oke elu, nke nwere ike belata okpomọkụ ma mee ka ndụ ọrụ nke igwe na-egwupụta ogologo.
Ogologo nkwa na ọnụ ala dị ala: Ọnụahịa nke igbe m na-emepụta site na Tianqi Mining bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha dabere na ụkpụrụ nke mma.
Ntak emi Họrọ
Ejikọtara Mkpụrụ Egwuregwu Na-emegharị Mmiri
Uru nke eserese eserese kaadị igbe
a 20-ụkwụ ore igbe ikike n'ihe maka 180 tent, jirichaa ohere
ịmụta abụọ n'usoro imewe, elu ikuku si, n'akụkụ ikuku na.
Ghọta mmepụta ihe na ngwa ngwa ngwa ngwa
Biko jiri nlezianya rịba ama na ntinye ntinye achọrọ maka T17 + bụ 220V.
A nabatara ndụmọdụ maka ụbọchị 365 kwa afọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na email, ekwentị, Skype / Facebook / twitter! Anyị ike oru otu mgbe na njikere maka gị arịrịọ.
Mgbe ị ghọtara mkpa gị, anyị ga-enye gị ntụnye ọkachamara na nkwupụta. Mgbe emechara iwu ahụ, usoro mmepụta anyị ise ga-amalite ịmịpụta dị ka oge, ma duzie nyocha dị ka nyocha ọrụ na ule dị mma iji hụ na achọrọ ihe ị chọrọ n'ụzọ ziri ezi.
Otu ndị na-ere ahịa ga-ahazi ngwa ngwa na njem maka gị, soro ma kọwaa usoro niile iji hụ na ịbịakwute gị nchekwa.
O nweghi ihe o mere na mgbe inwere echiche ọhụrụ ma ọ bụ echiche ma ọ bụ na ngwaahịa ndị dị ugbu a enweghị ike igbo mkpa gị. Gwa anyị ihe niile ị chọrọ, anyị ga-echepụta ma mepụta dị ka ihe ị chọrọ si dị, ma nyefee gị ya ngwa ngwa o kwere mee.
Mara gị ngwa ngwa Ngwuputa mkpa, anyị na-agbalị iji belata ọ bụla ọjọọ ihe tupu nnyefe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ ngwaahịa anyị, anyị ga-etinye ya na saịtị ahụ. Site na nka anyi nwere, anyi nwere ike itinye igbe ogbunigwe a ngwa ngwa o kwere mee. N'ihi ya, a ga-echekwa oge gị dị oke ọnụ ahịa.
mkpuchi crypto asic, btc akpa, antbox akpa, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, antminer akpa, obere akpa,